यति छिट्टै रणवीर बने टुहुरो, यस्तो थियो बुवा ऋषिको अन्तिम इच्छा ! – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/यति छिट्टै रणवीर बने टुहुरो, यस्तो थियो बुवा ऋषिको अन्तिम इच्छा !
13,8512minutes read
अमेरिकाबाट फर्किएपछि रणबीर कपुर आफ्ना आमा–बुवाको घरमा फिर्ता जाने योजना बनाइरहेको रणवीर । रणबीर कपूरका एक आफन्तले पत्रिकासँग कुराकानी गर्दै भने, ‘हालको परिस्थिती (ऋषि कपुर बिरामी भएपछि) ले रणबीरलाई उनका आमा–बुवासँग नजिक ल्याएको छ । उनी आफ्ना आमा–बुवासँग धेरैभन्दा धेरै समय बिताउन चाहन्छन् ।’ एक पत्रिकासँग कुरा गर्दै ऋषि कपुरले अमेरिकाबाट भने, ‘म पुनः काम गर्नका लागि उत्सुक छु । मेरो स्वास्थ्य अहिले निकै राम्रो छ । धेरैले मेरो लगातार सोधपु
लकडाउन उल्लंघन गरे काठमाडौंमा कर्फ्यु लगाउने !